कोशीले कुन सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्छ ? - Jhilko
‘कोशी’ नाम कौसिकीमुनी ऋषिको नामबाट बनेको हो । यो नामले एक सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसर्थ जतिनै साझा वा भूगोलको रटान दिए पनि यसले एकल साम्प्रदायिक भावनाको बिजय गराउदछ । कोशी र मेची अन्चल पचायती ब्यबस्थाले पल्लो किरात लिम्बुवानलाई मेटेर राखेका नाम हुन । २०१७ साल अघिका कागज पत्र हेर्ने हो भने यश प्रदेसको नाम ‘पल्लो किरात लिम्बुवान’ भेटिन्छ । ‘पल्लो किरात’ सम्बत १८८२ ÷ ८३ ताका थपिएको हो । यस अगाडि यस भूगोलको नाम ‘लिम्बुवान’ लेखिन्थ्यो । ‘लिम्बुवान’ भुगोलको नाम सम्बत १८३१ असोजको लालमोहरबाट नामाकरण गरिएको हो । लिम्बू किङडम काठमाडौपूर्व रहेको प्राचीन नक्सा कर्णेल युनिभर्सिटी अमेरिकाको लाइब्रेरीमा रहेको छ । लिम्बूहरुले तामाकोशीमा गोर्खाली सेनासङ्ग युद्द लडेको लालमोहर पाइएको छ ।
त्यसैगरी हडसन पान्डुलिपिमा याक्थुङ्बा (लिम्बू) हरुले आठ दिनको बाटो पर गोर्खालीहरुलाई लखेटेका थिए । ती ठाउँहरु चैनपुर, झाँगाझोली, दुम्जा, बारबिसे हुन जो हाल सिधुली, रामेछाप, काभ्रे, दोलखा जिल्ला र सुनकोशी नदि आसपास रहेका छन । नेपाली शासनको बागडोर शाहकाल अगाडि स्वतन्त्र स–साना देसहरु थिए । २२ से २४ से देशहरुदेखि उपत्याकामा मल्लका ३ देश थिए । पूर्वमा मकवानपुर, चौदण्डी, बिजयपुर सेन दाजुभाईले बाडेर खाएका थिए । बिजयपुर बिजयनारायण राय (लिम्बू) को देश थियो । लिम्बूहरुले पहाडमा १० र मधेसमा केन्द्र शासित गोस्वारा (साझा) मोरङ प्रान्त थियो ।
त्यतिखेरको प्रचलन दाजुभाइमा देश भागबण्डा लगाएर शासन गर्ने चलन थियो । पृथ्वीनारायण शाहले पनि उनका भाईहरुलाई यहि वचन दिएका थिए तर पछि जितेका भू–भाग दाजुभाईलाई नबाडदा भाईहरुबाटै मारिए । उनको अन्त्यस्टी देबघाटमा गरियो र बाघको टोकाईबाट मृत्यु भएको कथित ईतिहास वनाइयो । पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवान दुई तरिकाले लिए । युद्ध र सन्धी । लिम्बू दुई भागमा बाँडिए । राजा बुद्धिकर्ण र बिजयपुरका प्रथम सेनापती काङ्सोरे, याङ्वारक, मोरङ बिजयपुर, छथर, चैनपुर खपनिया, अरुण युद्धमा होमिए । दोस्रो सेनापति मुदिम्बा खेवाहाङ गोर्खालीसङ्गको युद्धमा चतराघाटमा मारिए । अन्य ८४ जना लिम्बू सेना गोर्खालीद्वारा बिजयपुरको युद्धमा मारिए । बुद्धिकर्ण राय २०३४ सालसम्म कम्पनी टेरिटोरिमा बसेर लडे ।
पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रतापसिङ शाहको शासनकाल बुद्धिकर्णसङ्ग लड्दै बित्यो । कुम, सुन, जङ्ग राय (लिम्बू) सन्धी सम्झौतामा १८३१ साउन १२ सुदिमा गए । राय भनिदै गरेकालाई गोर्खालीले चेपाङलाई प्रजा भनेझै लालमोहरमा ‘लिम्बू’ बनाई दिए । लिम्बू जात जाति थिएनन र होइनन उनिहरु आदिबासी मुलबासी हुन । उनकै जमिन भएकाले ‘लिम्बुवान’ १८३१ असोजको लालमोहरबाट नामाङकन गरियो । यो भन्दा अगाडि याक्थुङ लाजे थियो । थिबोङ याक्थुङ लाजे प्रख्यात थियो । कोशी प्रदेश राखेझै लिम्बू बनाइएका याक्थुङ्हरुले नाम राख्दा याक्थुङ लाजे भन्थे होला ? यसरी नै आफ्नो पुर्खा कौसिकी मुनिको नामबाट प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने भए ‘याक्थुङ लाजे’ पनि राख्नु पर्ने हुन सक्दछ । चेतना भया ।
पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरु विकिनी र समुन्द्री तटमा अर्धनग्न भएका खिचेका तस्वीरहरु...
नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई २–० गोलले हराउँदै एपीएफले उपाधि चुमेको हो । ...
रजनीलाई डेढ लाख रुपैयाँको पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा
इन्डोनेसियाको बताममा भएको प्रतियोगितामा रजनीले शारीरिक सुगठनको महिला ५५ केजीमा रजत...
नेपालमा कोरोनाको यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
अहिलेसम्म १ हजार ८ सय ९० जनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको छ भने एकैदिनमा १ सय ९३...